Imbali kunye nokuzivelela kweeLogo zeMoto | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 29, 2015 NgoLwesine, Aprili 30, 2015 Douglas Karr
Ukuchongwa okubonakalayo kubaluleke ngaphezu kokuba abantu abaninzi bakholelwa. I-logo ayibonisi nje uphawu, ihlala ineentsingiselo ezininzi kwaye inokulandela umkhondo kwimbali yenkampani. Iinkampani ezininzi ziyamelana nokutshintsha ilogo. Banokuchitha imali eninzi, okanye banenkxalabo malunga neendleko kunye nomzamo ofunekayo xa kusenziwa ngokutsha igama
Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ekwenzeni uphuculo lwelogo yakho ukuyigcina ifanelekile ekukhuleni nasekuvuthweni kwenkampani yakho- kunye nokuyigcina yeyangoku kwaye kufanelekile kubaphulaphuli bakho. Ukuba kukho umzi-mveliso omnye apho utshintsho lwelogo lubiza kakhulu-lushishino lweemoto. IiLogo azikho nje kwisibambiso ngasinye, ziyafumaneka kuyo yonke indawo emotweni yakho.
Jonga ujonge ixesha elizayo xa ungena emotweni yakho… kwihood, izibane zomnyango, imethi yomgangatho, igumbi lesikhuseli, umboko, iiasi zeevili nkqu nakwigumbi lenjini. Kwaye ngoku ngokuboniswa kwesisombululo esiphakamileyo, bamelwe ngokwamanani ngokunjalo. Eyam ide ijikeleze kwaye ibaleke iye kwiscreen.
Ukuba uziphicotha ezi logo, uya kubona ukuba phantse bahlala benolunye uhlobo lokujonga kunye nokuziva kubo. Ndicinga ukuba iphantse iyimfuneko kuba bakhelwe kuyo yonke imoto. Abaqulunqi be logo yemveli bahlala beyithiyile loo nto kuba bebehlala beqinisekisa ukuba iilogo zijongeka zilungile kumnyama nomhlophe, kumatshini wefeksi, ukuya kwipeyinti yodonga. Ezo ntsuku zisemva kakhulu kuthi, nangona kunjalo.
Njengoko iilogo ziqhubeka nokuvela, andiqinisekanga ukuba bayakuhlala benyakazekile… kodwa ndicinga ukuba bazakuqhubeka nobunzulu kunye nobukhulu kubo. Nokuba uyilo olucekeceke lwalunemiqolo yobunzulu.
Okubandakanyiweyo kwi-infographic yiAlfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugot, Renault, Škoda, Vauxhall, kunye neVolkswagon. Ndongeza i-Chevrolet emva kwe-infographic yethu kuthi kwelinye icala ledama.
tags: alfa romeouphawu lwe-alfa romeoUarton martinlogo yemartinizandilogo ye-audiiilogo ezizenzekelayoi-BMWlogo ye-bmwcadillacilogo yecadillacuphononongo lomthengisi weemotofiatlogo ye fiatiholideIfowuni yelogologo yendalekologo yelogomazdalogo ye-mazdaNissanlogo yelizwePeugeotlogo ye-peugotkwakhonalogo yokuvuselelaSihlalologo yesihlaloskodalogo yeskodaifamilylogo yevauxhalliqulunIVolkswagon logo